Ngaba ikhona indlela eyona ndlela yokugqithisa i-PageRank yam nge-backlinks?
Kukho izicwangciso eziliqela ezichanekileyo ezisetyenziswayo ukuphakamisa mhlawumbi zonke iiWebhu okanye iBlogs's PageRank nge-backlinks. Kwaye ngaphambi kokuba siqale, makhe sijamelane nayo - awukwazi ukuba "isibhakabhaka" ngokuqinisekileyo "PageRank yakho" ekhoyo nge-backlinks, kungakhathaliseki ukuba ilukhuni okanye ilungiswe njani. Ngokuqinisekileyo, iphrofayli yakho ye-backlink ifaka phakathi kwezinto eziphambili ezibaluleke kakhulu xa kuziwa kwimpembelelo enokulinganisa ekugqibeleni ibeka iphepha lakho lewebhu. Phakathi kwezinye izinto eziqwalaselwa ziinjongo ezinkulu zophando ezifana ne-Google, zilandelayo: zivumela ngokwazo, eziphambili ezijoliswe kumagama asemgangathweni, umxholo wecandelo elilodwa, kunye nezinye iipropati ze-website ezingabonakaliyo kwi-SEO. Ukubuyela emva kwinqanaba - akunakwenzeka ukuphucula ngokukhawuleza i-PageRank yakho nge-backlinks. Kodwa lo msebenzi usenokuphumelela, ngenxa yokuba uzimisele kwaye ulungele ukusebenza nomonde kwiqhinga lakho elide lexesha elide. Ngezantsi mhlawumbi iindlela ezinengqiqo zokudibanisa isakhiwo esinokubamba iqhaza kwi-page yakho ephezulu kwiGoogle.
Makhe ndikunike igama lokugqibela lokulumkisa - ungaze uzame ukukhulisa i-PageRank nge-backlinks automation. Ngoko, oku ku funeka kuthathelwe ingqwalasela yokuqala:
Gxininisa ngakumbi kuMgangatho, kunokuba ubuninzi
Ingqiqo eyintloko eyenza isabelo seengonyama seSET isicwangciso sokubheja kumgangatho wodwa. Ngokucacileyo, injongo yehlabathi ye-SEO kukufezekisa umphumo ozinzile kunye ohlala njalo kwi-intanethi yokukhuthazwa kwi-SERPs. Ngelishwa, iibhloko ezininzi zeeblogi kunye ne-novice webmasters zijongene nengxaki ephezulu kunye nezixhobo zokwakha. Ndiyathetha ngokuthe rhoqo ukuba zibeka phambili phambili kubuninzi, kwithemba elithemba ukuba ukulahla ipakethe enkulu ye-backlinks apho kuya kwenza ukuba i-rankings yabo ikhule. Kodwa ayenzi kakubi ngenxa yokuba unxibelelwano oluphantsi okanye olungabalulekanga alusebenzi nje kuphela ngeenjongo ze-SEO. Enyanisweni, kukho amathuba aphezulu okufumana isohlwayo esinokumisela, endaweni yenkqubela phambili. Kwiimeko ezinzima kakhulu, yonke into ingaphelela ngokuvalwa ngokusisigxina ekufuneni.
Xhuma kwiNiche yakho okanye kwiShishini lakho loShishino
Ungalokothi wenze le mpazamo embi, njengoko ndadlulile iminyaka emininzi edlulileyo. Enyanisweni, ndandisoloko ndihamba ngendlela engafanelekanga yokufumana i-backlink kwiblogi yam - nje ndidibanisa kwiwebsite ebonakalayo ethembekileyo ndifumene ukubaluleka kokusebenzisana. Ukwenza njalo, ininzi yamasandlink am esandulweyo ayiphumelelanga ukuba ayifaneleke-akude onke awakhiwe ngaphakathi kwisitem. Ngenxa yoko, ndandichitha umthwalo omkhulu wexesha kunye nemizamo - ukuze udideke ukuba ungenayo i-PageRank kwi-backlinks. Kungoko ngaphambi kokubandakanyeka kwiimbono kunye neengxoxo zengxoxo, ndiyakhuthaza ngokuqinileyo ukuba ndihlolisise ukuba imithombo ejoliswe kuyo iphelele kwi-niche yakho okanye ihlala kwindawo efanayo shishini shishini.
Phatha igama eliphambili Uphando lokugcina iiAnchors ngokufanelekileyo
Ewe, akukho mfuneko yokuthi umxholo ngukumkani. Yonke into malunga ne-SEO ihamba ngokukhawuleza ekukhetheni kokuchanekileyo kwamagama angundoqo kunye nohlalutyo olufanelekileyo lwe-semantic. Njalo yonke i-backlink kwiprofayili yakho yewebhusayithi, okanye i-anchor text to be more precise. Ngelishwa, indlela efanayo yokusingatha uphando olunzulu lwegama elingundoqo lugqithwa kaninzi. Yingakho uqwalasele ukubhala iikhonkco zakho zekhonkco ngokucophelela ngokunokwenzeka-ubuncinane usebenzisa i-AdWords okanye ezinye izixhobo zophando ngegama eliphambili.Ngaloo ndlela, uya kuqinisekisa ngokuchasene nokungalunganga ngenxa yokungabi nalutho lwayo ekufuneni. Qinisekisa ukuba ufikelele ngokukhawuleza kwaye ulandele zonke iindlela zokukhangela eziphambili kunye neempawu ezibonakalayo ze-semantic. Khumbula, iimbalo ezibini ezibonakalayo ezifana ne-anchor zinika unxibelelwano olunokungalingani nesebenzayo, kwaye oko kukuchaphazela ngonaphakade i-PageRank kwiindlela zabo Source .